निर्धन उत्थान लघुवित्तद्वारा ३१.०५२६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव, बोनस कति ? « Lokpath
निर्धन उत्थान लघुवित्तद्वारा ३१.०५२६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव, बोनस कति ?
काठमाडौं । निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि आकर्षण लाभांश घोषणा गरेको छ । संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पूँजीको ३१.०५२६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।
संस्थाको हिजो मंसिर ९ गते, बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पूँजीको २९.५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.५५२६ प्रतिशत नगद गरी कुल ३१.०५२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उक्त प्रस्तावित लाभांश राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई र संस्थाको आगामी साधारण सभाबाट पारित भएपश्चात वितरण गरिनेछ ।
प्रकाशित मिति: २०७८,मङ्सिर,१०,शुक्रवार १०:४५
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेपको मात्रा क्रमशः घट्दै गएको पाइएको छ । नेपाल बैंकर्स सङ्घले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार पछिल्लो एक
सेयर बजारमा २१.४८ अंकको गिरावट
काठमाडौं । साताको दोस्रो दिन आज (सोमबार) पनि सेयर बजारमा गिरावट आएको छ । आइतबार भारी गिरावट आएको सेयर बजारले
एमाले महाधिवेशनले महँगियो सौराहा : होटलहरूको ब्रह्मलुट
चितवन । बजारमा सामान्य होटलमा दुधको चियाको मूल्य कति होला ? तपाईँले सोच्नुभएको होला– २०, ३० वा ३५ रुपैयाँ ।
काठमाडौं । आज (सोमबार) नेपाली सुनको मूल्य घटेको छ । आज सुनको मूल्यमा प्रतितोला एक सय रुपैयाँले गिरावट आएको हो
एमाले महाधिवेशन : लम्बिँदै निर्वाचन, नेता, कार्यकर्ता र पत्रकार आज…